3 lakilen'ny fanoratana mahomby | Martech Zone
Alarobia, Martsa 23, 2011 Alakamisy, Septambra 19, 2013
Ny kopia tsara dia zavatra mahatsikaiky. Mafy tokoa ny mamorona nefa mora levona. Ny fanoratana tsara dia tsotra, mifampiresaka, lojika ary mora vakiana. Mila misambotra ny votoatiny sy ny fanahin'ny vokatra, serivisy na fandaminana izy io, raha mifandray mivantana amin'ny mpamaky.
Mafy ny asan'ny mpanoratra. Voalohany, tsy maintsy potehinao amin'ny ambaratonga fototra indrindra ny zavatra soratanao. Ny fanoratana kopia dia tsy toerana hanehoana teny lehibe lehibe fantatrao. Ny momba ny fahazoana ny teboka sy ny fampitomboana ny sanda. Saingy tsy momba ny vokatra fotsiny io.
Ny fahalalana ny mpanjifa dia dingana voalohany mankany amin'ny fanoratana kopia mahomby.
Zava-dehibe tokoa io fehezan-teny farany io averiko. Ny fahalalana ny mpanjifa dia dingana voalohany mankany amin'ny fanoratana kopia mahomby.
Na manoratra kopian'ny dokam-barotra ianao, na ny mailaky ny orinasa, na ny antso an-tsipika iray, ny asan'ny mpanoratra dia ny miditra ao an-dohan'ny mpamaky. Inona no faharetan'ny sain'izy ireo? Inona no antenain'izy ireo? Ahoana no hitondran'ny vokatra lanja azy ireo? Nahoana izy ireo no tokony handeha amin'ny marika iray hafa?
Ny fahalalana ny mpihaino kendrena dia hanampy anao hahafantatra ny fomba handanian'izy ireo ilay kopia. Inona avy ireo karazana andrasana na zavatra niainany taloha izay azon'izy ireo miaraka amin'ilay orinasa na vokaranao? Inona no karazana hetsika na valiny ezahinao angatahina amin'izy ireo?
Ireto dia fanontaniana vitsivitsy fotsiny apetraky ny mpanao kopia mpanoratra alohan'ny handrafetana feon-kira. Arakaraka ny ahalalanao ny mpamaky kendrenao no mora kokoa hanintonana ny faran'izy ireo. Ny pitch solid dia natao hampahafantaran'ny mpamaky ny fanamorana ny fiainany.
Fantaro ny vokatra.
Ny fidirana ao an-tsain'ny mpamaky lafatra anao dia manampy anao hahatakatra ny fomba hampiasan'izy ireo ny vokatra tadiavinao hivarotra. Ny dingan'ny akanim-borona dia manamboatra ny pitch mba hanomezana izay ilain'izy ireo manokana. Betsaka ny fomba fampiakarana ny vokatra mitovy, fa ny mpanao kopia mpanoratra mahay mahita ny fomba mahomby indrindra.
Ity misy ohatra iray: azoko sary mora foana ny karazana mpanjifa efatra na dimy liana amin'ny fividianana tampon-trano vaovao, fa samy hafa kosa ny fifandraisan'izy ireo amin'ny vokatra.
Ny geek teknolojia dia mety te hahafantatra ny mason-tsivana amin'ny fikirakirana, ny isan'ny seranan-tsambo USB ananany, ny angona angona afaka tantaniny amin'ny fomba mandaitra ary ny karazana rindrambaiko anohanany.
Ny gamer dia liana amin'ny hafainganam-pandehan'ny Internet, ny kalitaon'ny horonantsary, ny kara-peo, ny lalao misy ary raha mahazaka mpanera izy.
Mety mitady ny fifandraisana wi-fi, ny fampiasana azy mora foana, ny mifanentana amin'ny antontan-taratasy ary ny fanohanana ara-teknolojia ny pro mpandraharaha.
Ny audiophile dia misintona hira am-polony indray mandeha ary te-ho afaka hitendry ny fitehirizam-bokiny mitombo hatrany amin'ny alàlan'ny rafitra stereo an-trano.
Satria hitanay ny mpihaino kendrena sy ny filan'izy ireo, dia azonay atao ny manasongadina ny vokatra amin'ny fomba tsara indrindra hamaly ireo filàna ireo.
Manamboara asa tanana ny Pitch
Androany dia kopia ratsy be dia be no mifantoka amin'ny fampiasana teny lakile. Ny fitsipiky ny SEO dia toerana tsara hanombohana, fa ny mpanoratra manao kopia kosa dia manenona ny teny fanalahidy voajanahary, nefa tsy manery azy ireo amin'ny toerana tsy anisany. Manelingelina azy ireo fotsiny ireo mpanoratra ratsy, ka mampiavaka ny teny lakile ho toy ny koro amin'ny fandevenana.
Raha ny fahitako azy, ny fanoratana an-tsoratra tsara indrindra dia tsy toa fivarotana sarotra. Ny ankabeazan'ny mpanjifa dia tsy tia voadonan'ny pitch amin'ny lohany. Izy ireo dia mifandraika amin'ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'izy ireo sy ny fahatsapany. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanaovana ny legwork raha ny amin'ny fikarohana ny mpihaino sy ny vokatra.
Inona ny hevitrao? Inona no tadiavinao amin'ny fanoratana mahomby? Avelao ny eritreritrao amin'ireo hevitra etsy ambany.